YEMEN: Maleeshiyaadka Cadan oo ogolaaday wadahadal • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / YEMEN: Maleeshiyaadka Cadan oo ogolaaday wadahadal
YEMEN: Maleeshiyaadka Cadan oo ogolaaday wadahadal
August 13, 2019 - By: Axmed Muuse
Dowladaha Xulafada ah ee Sacuudiga iyo Imaaraatiga ayaa ku baaqay in waan waan laga dhex bilaabo maleeshiyaadka gooni u goosadka ah ee Koonfurta Yemen iyo Dowlada Caalamka uu aqoonsan yahay ee Madaxweyne Abd-Rabbu Mansour Al Hadi.
Maleeshiyaadka Cadan ayaa Sabtidii lasoo dhaafay awooda ciidan kula wareegay Qasrigii Madaxtooyada Cadan oo ahaaa xaruntii KMG ahayd ee Dowlada Yemen.
Dagaalkii maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada Cadan ayaa bilowday kadib markii is-rasaaseyn dhexmartay taageerayaasha Gooni u goosadka Koonfurta Yemen iyo Ciidamada Madaxtooyada.
Dowlada Imaaraatiga ee iyadu taageero hub iyo tababar siisa maleeshiyaadka Cadan ayaa la rumeysan yahay inay lug weyn ku leedahay dagaalka ka dhacay magaalada Cadan, Abu Dhabi ayaa mudooyinkii danbe si weyn u dhaliilaysay Xukuumada Yemen ee uu hogaamiyo Madaxweyne Abd-Rabbu Mansour Al Hadi.
Sacuudiga ayaa isagu weli taageeraya Xukuumada Hadi isla markaana ku tilmaamay duulaanka maleeshiyaadka Cadan ay ku qabsadeen Madaxtooyada Cadan inuu ahaa Inqilaab militari.
Maleeshiyaadka Cadan ayaa Isniintii shalay ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin inay ka qeyb qaataan wadahadalada ay ku baaqeen dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraatiga, walow aan weli la ogeyn in lagu guuleysan doono in dib loo middeyo ciidamada dowlada Yemen iyo kuwa Cadan oo uu gebi ahaan burburay isbaheysigii ka dhaxeeyey.